Ithegi: ukwenziwa kwenkqubo » Martech Zone
Ithegi: ukwenziwa kusebenze
NgoLwesihlanu, ngoJuni 12, 2020 NgoLwesihlanu, ngoJuni 12, 2020 UHardik Oza
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Zihambile iintsuku apho amaqela okuphumelela kwabathengi ebulaleka ngeefowuni ezingenamda kunye nabathengi ukuba baphathe. Kungenxa yokuba ngoku lixesha lokuba uhlasele kancinci kwaye ufumane okungakumbi ngokwempumelelo yabathengi. Yonke into oyifunayo zizicwangciso ezithile zobuhlakani, kwaye mhlawumbi noncedo oluvela kwinkampani yokuphucula isicelo se-SaaS. Kodwa, nangaphambi koko, konke kuyehla kukwazi iindlela ezifanelekileyo zempumelelo yomthengi. Kodwa kuqala, uqinisekile ukuba uyazi ukuba ikota. Masenze
NgoLwesine, Septemba 10, 2015 NgoLwesine, Septemba 10, 2015 UVenkat Viswanathan
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Kwindawo yanamhlanje yokuthengisa ekhuphisanayo, izinto ezizezakho zibonelela ngeempawu ezahlukileyo kumlo wokubamba ingqalelo yabathengi. Iinkampani kulo lonke eli shishini zizama ukuhambisa amava angalibalekiyo, amava abathengi okwakha ukuthembeka kwaye ekugqibeleni baphucule ukuthengisa- kodwa kulula ukutsho kunokuba kwenziwe. Ukwenza olu hlobo lwamava kufuna izixhobo zokufunda malunga nabathengi bakho, ukwakha ubudlelwane kunye nokwazi ukuba loluphi uhlobo lwezinto abanokuthi babe nomdla kuzo, kwaye nini. Yintoni ebaluleke ngokulinganayo kukwazi
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Siphila kumaxesha apho kuya kusiba lula kwaye kube lula ukwenza ezakho izisombululo. Uninzi lwezixhobo zesiko kwi-Intanethi zakhiwe ngexesha elahlukileyo- apho i-SEO, ukuthengisa umxholo, imidiya yoluntu, iAjax, njl. Kodwa sisaqhubeka sisebenzisa izixhobo, ukuvumela utyelelo, ukujonga iphepha, ukubhuma kunye nokuphuma kwilifu kwisigwebo sethu bengazi nokuba bayazichaphazela ngokwenene. Iimetriki ezibaluleke kakhulu azikho